မြန်မာပြည်ရဲ ့ပထမဆုံးကားစစ်ဆေးတန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးမယ့် Toyota Aye and Sonsရဲ့ (Assessment service) ၀န်ဆောင်မှု အကြောင်းသင်သိပါသလား? | Mizzima Myanmar News and Insight
မြန်မာပြည်ရဲ ့ပထမဆုံးကားစစ်ဆေးတန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးမယ့် Toyota Aye and Sonsရဲ့ (Assessment service) ၀န်ဆောင်မှု အကြောင်းသင်သိပါသလား?
လက်ရှိစီးနေတဲ့ ကားကိုရောင်းထုတ်ပြီးရန်ကုန်မှာ ကားအသစ်ဝယ်စီးဖို့စဉ်းစားနေပါသလား? ဒါမှမဟုတ်မိမိစီးနေတဲ့ကားရဲ့အရည်အသွေးအဆင့် (Grade) ဘယ်လောက်ရှိသလဲသိချင်နေပါသလား?
TOYOTA AYE AND SONS မှ သတင်းကောင်းယူဆောင်လာပါပြီ။ ပြောင်းလဲနေတဲ့ကားလောကအခြေအနေတွေကြောင့် ခေါင်းရှုပ်စိတ်ညစ်စရာမလိုတော ့ပါဘူး။ “ကားစစ်ဆေးတန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း” (Car Assessment Service)လို ့ခေါ်တဲ ့Toyota အစဉ်အလာမပျက်ထိ်န်းသိမ်းထားတဲ့အဆင့်မီ ၀န်ဆောင်မှု တစ်ခုကိုTOYOTA AYE AND SONSမှစတင် မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ မြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးသော ၀န်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။
TOYOTA မှ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရ ကျွမ်းကျင်စစ်ဆေးသူမှ ဂျပန်အပါအဝင်အာရှအဆင့်မီစစ်ဆေးတဲ ့အတိုင်းသင့်ကားရဲ ့အပြင်ပိုင်း၊ အတွင်းပိုင်း၊ အင်ဂျင်၊ ဖရိန် စတာတွေနဲ ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်ပေါင်း (၂၀၀) ကျော်ကိုအကဲဖြတ်စစ်ဆေးပေးပြီးသင့်ကားရဲ ့အရည်အသွေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (Grade) နဲ ့ခန် ့မှန်းခြေစျေးကွက်ပေါက်စျေး (Market Price) တို ့ကိုသတ်မှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့်ကားအမျိုးအစားကိုမဆိုစစ်ဆေးပေးမှာဖြစ်ပြီးသင့်ကားကိုရောင်းထုတ်ဖို ့စိတ်ကူးရှိတယ်ဆိုရင်တော ့TOYOTA AYE AND SONSနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ရန်ကုန်ကကားအရောင်းစင်တာများနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီးရောင်းချနိုင်ဖို့ လည်းကူညီပေးသွားဦးမှာပါ။
ဒီထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ကားစစ်ဆေးခြင်း ၀န်ဆောင်မှုအတွက် မြန်မာငွေ (၁၄၀၀၀) ကျပ်သာကျသင့်မှာဖြစ်ပြီးTOYOTA AYE AND SONSမှပေးအပ်တဲ့ကားစစ်ဆေးမှုရလာဒ်မှတ်တမ်း (Assessment Result Sheet) နဲ့အတူ Service Member Card ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်လည်ရောင်းချလိုတဲ့ Customerများအနေနဲ့ Market Price အတိုင်းရရှိပြီးအချိန်ကုန်သက်သာစေရန် TOYOTA AYE AND SONS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအရောင်းစင်တာများနှင့်ချိတ်ဆက် ရောင်းချပေးမှာပါ။ TOYOTA AYE AND SONS Service Member Card ရရှိသွားတဲ့အတွက်လည်းTOYOTA AYE AND SONSရဲ့ အခြားသော ၀န်ဆောင်မှုတွေအပေါ်မှာ Discounts တွေ ရရှိနိုင်တော့မှာပါ။ TOYOTA AYE AND SONSရဲ့ Premium Member Card ရှိပြီးသားသူတွေအတွက်ကတော့ ကားစစ်ဆေးခြင်းဝန်ဆောင်မှု တစ်ကြိမ် အခမဲ့ရယူနိုင်ပါတယ်။
ကဲ.. ဒါဆိုဘာကိုစောင့်နေဦးမှာလဲ။ သင့်ကားကိုစစ်ဆေးဖို့ အခုပဲအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ Link ကို ၀င်ရောက်စာရင်းသွင်းလိုက်ပါတော့။ စာရင်းသွင်းပုံသွင်းနည်းအဆင့်ဆင့်(step by step)ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပထမအဆင့် ။ အောက်ဖော်ပြပါ TOYOTA AYE AND SONS Link ကို ၀င်ပါ။
ဒုတိယအဆင့် ။ Sign-up and Log-in ပြုလုပ်ပါ။ (စာရင်းသွင်းပြီးမိမိအကောင့်ကို ၀င်ရောက်ပါ။)
တတိယအဆင့် ။ သင့်ကားအချက်အလက်တွေကိုထည့်သွင်းပြီးသင်လာရောက်နိုင်မည့် နေ့နှင့်အချိန်ကိုရက်ချိန်း (appointment) ပြုလုပ်ပါ။
စတုတ္ထအဆင့် ။ သင် ရယူထားတဲ့ ရက်ချိန်းအတိုင်းTOYOTA AYE AND SONSသို့လာခဲ့ပါ။
ပဥ္စမအဆင့် ။ စစ်ဆေးချိန် ၁ နာရီခန့်စောင့်ဆိုင်းပြီးသင့်ကားရဲ့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်(Grade) နဲ့ ခန့်မှန်းစျေးကွက်ပေါက်စျေး(Market Value) ကိုသိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကားချစ်သူများ ပျော်ရွှင်သောမိသားစုဘဝ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
Toyota Aye and Sons (T.T.A.S Co.,Ltd.)